09 769 786 400
အိပ်ခန်းသုံးနှင့် ရေချိုးခန်းသုံး ပစ္စည်းများ
နာရီ နှင့် လက်ဝတ်ရတနာများ
ဝိုင် နှင့် ရှန်ပိန်များ
Workspace Co., Ltd.
Hitachi Home Electronics Myanmar Co.,Ltd.
Royal Modern Furniture (Myanmar Furniture Co.,Ltd ).
IKON Trading Co.,Ltd.
New World Mart Furniture & Kitchen Ware
Living Square Myanmar Co., Ltd
Amazing one Co.,Ltd
N3 Gems and Jewellery
Asia Salute Company Limited
Gandamar Office Machines Ltd.
VSK International Co.,Ltd
Myanmar Kowa International Co.,Ltd
Golden Glory Int'l Trading Co., Ltd
Primus Solution Co.,Ltd
Dream Walker Art Gallery
Art of Beautiful Myanmar
Concorde Industries Ltd
BECOOL Handicraft & Myanmar Gems Painting
Emart by OK Myanmar Co., Ltd
Skyworth Electronics Myanmar
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခြင်း မေ ၁၄, ၂၀၁၇
ဤစည်းကမ်းချက်များကို လူကြီးမင်းတို့ကို ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကြားက သဘောတူညီချက် အဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤစည်းကမ်းချက်များကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ကြားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် မှတ်ပုံတင်စာရင်းမသွင်းမီ နားလည်ထားရန် လိုပါသည်။
တစ်စုံတရာနားမလည်သည်ရှိပါက မေးမြန်းပါ။ ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ ရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါမည်။
လူကြီးမင်းတို့ကို အကောင်းဆုံး မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့စာရင်းရရှိရန် ပြုလုပ်ပေးလိုပါသည်။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ
၁.၁ - www.mingalarletphwet.com ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို MP Partners ကုမ္ပဏီလီမိတက်က လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ MP Partners ကုမ္ပဏီလီမိတက်က ကုမ္ပဏီနံပါတ် ၂၁၇ အက်ဖ်စီဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ မှတ်ပုံတင်ရုံးခန်းမှာ အမှတ် ၆၉(က-၁)၊ ကမ္ဘောဇလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာတွင် တည်ရှိပါသည်။
၁.၂ - ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ Contact Us စာမျက်နှာကို ကြည့်ပေးပါ။
၂.၁ - ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းများ (လက်ဆောင်များ) ၏ ဓာတ်ပုံများမှာ နမူနာပြသခြင်းသက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အရောင်အားလုံးကို တိကျမှန်ကန်စေရန် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားထားသော်လည်း လူကြီးမင်း၏ ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်က လက်ဆောင်တွေရဲ့အရောင်ကို အတိအကျ ပြသမည်ဟု အာမမခံနိုင်ပါ။
၂.၂ - လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ထုပ်ပိုးမှုမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ပြထားသောပုံများနှင့် ကွဲပြားနေနိုင်ပါသည်။
၂.၃ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပြထားသည့် လက်ဆောင်အားလုံးနှင့် လူကြီးမင်း၏ လက်ဖွဲ့စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းလိုက်သည့် လက်ဆောင်အားလုံးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ စာရင်းကို အပြီးသတ်ချိန်တွင် လက်ဆောင်တစ်ခု မရရှိနိုင်သည်ရှိသော် ယင်းလက်ဆောင်တန်ဖိုးနှင့်ညီမျှသော ငွေကြေးက လူကြီးမင်း၏ ငွေစာရင်းထဲ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ အခြားလက်ဆောင်တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို လူကြီးမင်းအသုံးပြုသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်း စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် လက်ခံနိုင်သော အသုံးပြုမှု မူဝါဒ (Website Acceptable Use Policy) အရ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့် အရေးကြီးသော စည်းကမ်းချက်များ ပါဝင်သောကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ အချိန်ပေးကာ သေချာဖတ်ပေးစေလိုပါသည်။
၄။ လူကြီးမင်းရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုမည့်ပုံစံ
၅။ လူကြီးမင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြားရှိ သဘောတူညီမှုပုံစံ
၅.၁ - ဤအဆင့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် လူကြီးမင်း၏ လက်ဖွဲ့စာရင်းကို ဖန်တီးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၅.၂ - လူကြီးမင်း၏အကောင့်ကို ဖန်တီးပြီးသည့်နောက်တွင် လူကြီးမင်း၏အကောင့်ကို ဖန်တီးပြီးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အကြောင်းကြားစာ (message) ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအခြေအနေတွင် လူကြီးမင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင် (ယခုစည်းကမ်းချက်များကို သိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်ကြောင်း) သဘောတူညီချက် ရရှိသွားပါပြီ။
၆။ စည်းကမ်းချက်များကို ပြောင်းလဲရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခွင့်အရေး
၆.၁ - သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုအပ်ချက်များရှိလာသည့်အခါ အချိန်နှင့်အမျှ စည်းကမ်းချက်များကို ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
၆.၂ - ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှာ လူကြီးမင်းက အကောင့်သစ်တစ်ခု ဖွင့်တိုင်း ယင်းအချိန်တွင် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များက လူကြီးမင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြားက သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
၆.၃ - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပြင်ဆင်သည့်အချိန်တိုင်း လူကြီးမင်းကို အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်လိုက်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အချိန်ကို ဤစာမျက်နှာ၏ ထိပ်ဆုံးတွင် ဖော်ပြသတိပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၇။ ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုခြင်း
၇.၁ - ဤဝန်ဆောင်မှုဖြင့် လူကြီးမင်းက အွန်လိုင်းပေါ်တွင် လက်ဖွဲ့စာရင်းတစ်ခု ဖန်တီးပြုပြင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၇.၂ - ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တင်ထားသော တံဆိပ်များနှင့် ဆိုင်များမှ လူကြီးမင်း ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းအမှတ်တံဆိပ်များမှ ပစ္စည်း ၅,၀၀၀ ကျော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ပြသထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ တွဲဖက်ဆိုင်တစ်ခုမှ တခြားလိုချင်သည့်ပစ္စည်းရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို အကြောင်းကြားလိုက်ပါ။ လူကြီးမင်းအတွက် ယင်းပစ္စည်းကို ထည့်သွင်းရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ကြိုးစား ပြုလုပ်ပေးပါမည်။ ဓာတ်ပုံနဲ့ အညွှန်းတို့ကို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြပေးပါမည်။
၇.၃ - လက်ဆောင်ကတ်များနှင့် လက်ဖွဲ့ငွေကြေးထည့်ဝင်ခြင်းကို လူကြီးမင်း၏ ဧည့်သည်များအတွက် ရွေးချယ်စရာ တစ်ခုအဖြစ် လူကြီးမင်း၏လက်ဖွဲ့စာရင်းတွင် အလိုအလျောက် ထည့်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၇.၄ - လူကြီးမင်း၏လက်ဖွဲ့စာရင်းတွင် ငွေကြေးထည့်ဝင်ခြင်းအမျိုးအစားများကို ထည့်သွင်းနိုင်ရန်လည်း ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ယင်းတို့တွင် ဟန်းနီးမွန်းခရီး ၊ လက်ဖွဲ့ငွေ၊ လက်ဆောင်ကတ်တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၇.၅ - လူကြီးမင်း၏စာရင်းတွင် ငွေကြေးထည့်ဝင်ခြင်းအရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် လက်ဆောင်ပစ္စည်း ဝယ်ပေးချင်သည့် ဧည့်သည်များလည်း ရှိသည့်အတွက် လူကြီးမင်း၏ စာရင်းတွင် ပစ္စည်းများကိုလည်း ထည့်သွင်းရန် အထူးအကြံပေးလိုပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ စာရင်းတွင် လက်ဖွဲ့ငွေကြေး ထားရှိခြင်းအတွက် အဖိုးအခကောက်ခံခြင်းမရှိပါ။
လက်ဖွဲ့ငွေကြေး သို့မဟုတ် လက်ဆောင်ကတ်ဖြင့် www.mingalarletphwet.com ရှိ ပစ္စည်းများနှင့် ဟန်းနီးမွန်းခရီးစဉ်ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ငွေကြေးအဖြစ် ထုတ်ယူ၍ မရပါ။
၇.၆ - မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ဆိုင် (Wedding Shop) မှာ လူကြီးမင်း၏ ဧည့်သည်များက ငွေကြေးပမာဏတစ်ခုဖြင့် လက်ဆောင်ကတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ယင်းကတ်ကို အသုံးပြုပြီး လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ကြိုက်ရာပစ္စည်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ယင်းမှာ လူကြီးမင်း၏ဧည့်သည်တွေအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် လူကြီးမင်းအား လက်ဆောင်တစ်ခု ဝယ်ပေးချင်သော်လည်း ပစ္စည်းမကျန်တော့သည့်အခါ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ လက်ဖွဲ့များအားလုံးကို ပို့ဆောင်ပေးရန် အသင့်ဖြစ်သည်နှင့် ပို့ဆောင်ရန်အဆင်ပြေသည့်နေ့တစ်နေ့ကို လူကြီးမင်းအနေဖြင့် သတ်မှတ်တောင်းဆိုနိုင်ပြီး ရက်သတ်မှတ်ပြီးပါက လူကြီးမင်း၏ လက်ဖွဲ့များကို ကျွန်ုပ်တို့က ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ လူကြီးမင်းဘက်က အဆင်ပြေသည်နှင့် ပို့ဆောင်ရမည့်ရက်ကို ရွေးချယ်ပေးရန်နှင့် လက်ဆောင်များ အသင့်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီး ၂၈ ရက်ထက် နောက်မကျစေရန် ကျွန်ုပ်တို့က အကြံပြုပါသည်။ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းချိန်က ပေးရန်တောင်းဆိုထားသော မြို့အမည်အရ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးအတွင်းတွင်ရှိပါက ပို့ဆောင်ခမယူဘဲ ပေးပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။ တခါတရံ ပေးပို့မှုကို ဆိုင်တစ်ခုချင်းဆီက သီးခြားစီ ပေးပို့သည်များ ရှိနိုင်ပါသည်။
၈.၁ - သဘောတူညီထားသော ပေးပို့ရန်နေ့ရက်တွင် လူကြီးမင်း၏လက်ဖွဲ့များကို လက်ခံရန်အတွက် လူကြီးမင်း ရှိနေပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းများ လက်ခံယူရန် လူကြီးမင်းဘက်က ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါက (လူကြီးမင်းဘက်က မည်သို့မှ ပြုလုပ်ပေး၍မရသောအကြောင်းကြောင့် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏အမှားကြောင့်မှလွဲ၍) ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း တခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါက လက်ဆောင်များကို အမှန်တကယ်ပေးပို့နိုင်ချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့က ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ပြီး ယင်းအတွက် ထိန်းသိမ်းခ (အာမခံကြေးအပါအဝင်) လူကြီးမင်းဆီက ကောက်ခံပါမည်။ နောက်ပိုင်းပစ္စည်းပေးပို့မှုများအတွက်လည်း ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံသွားပါမည်။
၈.၂ - လူကြီးမင်း ပေးထားသော လိပ်စာသို့ လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့က ပေးပို့ပြီးချိန်တွင် ပစ္စည်းပေးပို့မှုလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၈.၃ - လူကြီးမင်းပေးထားသော လိပ်စာတွင် လက်ဆောင်ရယူရန်အတွက် လူတစ်ဦးမှ မရှိလျှင် လက်ဆောင်များကို ပြန်ယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်း စာတစ်စောင် ထားရှိခဲ့မှာဖြစ်ပြီး ယင်းအခြေအနေတွင် ပေးပို့ရမည့်နေ့ကို ပြန်စီစဉ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။
၈.၄ - ပေးပို့ပြီးသွားပါက လက်ဆောင်ပစ္စည်းများအတွက် လူကြီးမင်းမှာသာ တာဝန်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
၈.၅ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုမှာ လူကြီးမင်း၏ လက်ဖွဲ့စာရင်းပိတ်ပြီး ၂၈ ရက်အတွင်း ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအချိန်အတွင်း လူကြီးမင်း၏လက်ဖွဲ့များကို လက်ခံရယူခြင်းမရှိခြင်းနှင့် အချိန်ရှည်ကြာသည့်တိုင် လက်ဖွဲ့များ ရွေးချယ်ခြင်းမရှိသေးပါက အချိန်လင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်း လူကြီးမင်း၏ ပစ္စည်းပေးပို့မှုအခြေအနေကို လူကြီးမင်း၏အကောင့်တွင် ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပြီး အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများ ကမ်းလှမ်းရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က လူကြီးမင်းဆီ ဆက်သွယ်ပါမည်။
လက်ဖွဲ့များကို ပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်း တစုံတရာပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဆောင်တွင် ပြဿနာတစ်စုံတရာဖြစ်ပေါ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင် လုံးဝတာဝန်မရှိတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်ဆိုင်များက လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို လူကြီးမင်းလက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းတွင် (မှားယွင်း ပေးပို့သော ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာထားသော ဖော်ပြချက်များနှင့် ကွဲလွဲခြင်းမှလွဲ၍) မလိုချင်တော့သော လက်ဆောင်များ ပြန်ပေးပို့ချင်သည့် တောင်းဆိုမှုများကို လက်မခံတော့ပါ။
၉။ လက်ဖွဲ့များ၏ ဈေးနှုန်း
၉.၁ - လက်ဖွဲ့များ၏ ဈေးနှုန်းများမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်။
၉.၂ - လူကြီးမင်း၏ ဧည့်သည်များက ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူသည့်အခါ ၎င်းတို့ ဝယ်ယူလိုသည့်နေ့တွင် ပြထားသော လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းဈေးနှုန်းအတိုင်း ပေးချေရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် လူကြီးမင်း၏ ဧည့်သည်က ငွေပမာဏတစ်ခု ပေးချေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းအတွက် ၎င်းတို့ပေးချေလိုက်သည့် ပမာဏအတိုင်း လူကြီးမင်း၏အကောင့်ထဲသို့ ငွေစာရင်းအဖြစ် ဝင်သွားမည်ဆိုသည်ကို နားလည်သဘောပေါက် ထားပါသည်။
၁၀။ ပစ္စည်းပြန်ပေးခြင်းများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများ၏ အာမခံများ
၁၀.၁ - လူကြီးမင်း၏ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအချို့တွင် ထုတ်လုပ်သူများ၏ အာမခံပါဝင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသေးစိတ်အတွက် လက်ဆောင်ပစ္စည်းနှင့် ပါလာသော ထုတ်လုပ်သူ၏ အာမခံကတ်ကို ကြည့်ရှုပေးပါ။
၁၀.၂ - အပြစ်အနာအဆာရှိသော သို့မဟုတ် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်သော လက်ဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လူကြီးမင်း၏ တရားဝင်အခွင့်အရေးတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ အာမခံချက် ပါဝင်ပါသည်။
၁၀.၃ - ဝယ်ယူထားသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလက်ဖွဲ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာမခံကတ်ကို ထုတ်လုပ်သူဘက်မှ လက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့် ပစ္စည်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် အကြံပြုပါသည်။ အာမခံကတ်က လက်ဆောင်ပစ္စည်းထုပ်ထဲမှာ ပါလာရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်
၁၁.၁ - ယင်းစည်းကမ်းချက်များကို လူကြီးမင်းဘက်က လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ရှိသော် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ယင်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါ့ဆခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ရလဒ်ဖြစ်ပါက ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ယင်းသို့မဟုတ်ပါက ကြိုတင်သိမြင်နိုင်ခြင်းမရှိသော တစ်စုံတရာ ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူညီမှု ပြုလုပ်ချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပျက်ကွက်မှုအကျိုးဆက် သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းက တွေးတောသိမြင်လျှင် ကြိုတင်သိမြင်နိုင်သော ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပါသည်။
၁၁.၂ - အောက်ပါအချက်များဖြစ်ပေါ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ တာဝန်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယောက် ဒဏ်ရာရခြင်း (သို့မဟုတ်)
လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် မမှန်မကန် ဖော်ပြမှု
၁၂။ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဖြစ်ရပ်များ
၁၂.၁ - သဘောတူညီချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိသော ဆောင်ရွက်ချက်တစ်စုံတရာ ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဖြစ်ရပ် တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင် တာဝန်ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဖြစ်ရပ် ဆိုသည်ကို အပိုဒ်ခွဲ ၁၂.၂ တွင် ရှင်းလင်းထားပါသည်။
၁၂.၂ - “ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဖြစ်ရပ်” ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော မည်သည့်ဖြစ်ရပ် ကိုမဆို ဆိုလိုပါသည်။ ယင်းတို့ထဲတွင် အကန့်အသတ်မရှိ သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ ပဋိပက္ခကြောင့်လုပ်ငန်းပိတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အခြားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု၊ လူထုဆူပူအုံကြွခြင်း၊ အထိကရုဏ်းဖြစ်ခြင်း၊ ကျူးကျော်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ စစ်ပွဲ (ကြေညာသည်ဖြစ်စေ၊ မကြေညာသည်ဖြစ်စေ) သို့မဟုတ် စစ်ပွဲပြုလုပ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခြင်း၊ မုန်တိုင်းတိုက်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံ ပျက်စီးပြိုကျခြင်း၊ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုးများ သို့မဟုတ် အစိုးရပိုင် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ ပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရထားလမ်း၊ သင်္ဘော၊ လေယာဉ်၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အခြားသော အစိုးရ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက သယ်ယူပို့ဆောင်မှု အသုံးပြုရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
၁၂.၃ - သဘောတူညီချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များကို ထိခိုက်လာသည့် ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဖြစ်ရပ် တစ်ခု ဖြစ်ပွားပါက..
လူကြီးမင်းကို အသိပေးရန် ဖြစ်နိုင်သည်နှင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းပါမည်။
သဘောတူညီချက်ထဲတွင်ပါသော ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်များကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ကာလအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလကို ထပ်တိုးပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဖြစ်ရပ်က လူကြီးမင်း၏ လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းများပေးပို့ရန်အတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလျှင် ယင်းဖြစ်ရပ်ပြီးသွားသည်နှင့် လူကြီးမင်းဆီ ပေးပို့ရမည့် ရက်စွဲသစ်ကို စီစဉ်ပါမည်။
၁၃။ ကျွန်ုပ်တို့ကြားက အဆက်အသွယ်များ
၁၃.၁ - ဤစည်းကမ်းချက်များတွင် စာဖြင့်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည့်အခါ အီးမေးလ်လည်း ပါဝင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၃.၂ - အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို စာရေးဆက်သွယ်လိုပါက [email protected] ကို အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါတည်။ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု (Customer Services) တယ်လီဖုန်းလိုင်းကို အသုံးပြုပြီးလည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
၁၃.၃ - ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က လူကြီးမင်းကို စာဖြင့် ဆက်သွယ်စရာရှိပါက သို့မဟုတ် အသိပေးလိုပါက အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ဆက်သွယ်ပါမည်။
၁၄။ အခြားအရေးပါသော စည်းမျဉ်းများ
၁၄.၁ - သဘောတူညီထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို အခြားအဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤစည်းမျဉ်းများအောက်ရှိ လူကြီးမင်း၏ အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် ဝတ္တရားများကို သက်ရောက်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
၁၄.၂ - ဤစည်းကမ်းချက်များ၏ စာပိုဒ်အသီးသီးမှာ သီးခြားစီ ဖြစ်ပါသည်။ တရားရုံးက သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်က စာပိုဒ်တစ်ခုခုကို တရားဥပဒေနှင့်မညီဟု ဆုံးဖြတ်ပါက ကျန်စာပိုဒ်များမှာ အပြည့်အဝ သက်ရောက်နေဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၄.၃ - ကျွန်ုပ်တို့ကြားက သဘောတူညီချက် မိတ္တူကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က ဖိုင်တွဲထားမည် မဟုတ်ပါ။
လက်ဆောင်ကတ်များ နှင့် ငွေကြေးလက်ဖွဲ့ခြင်း
၁၅.၁ - လက်ဆောင်ကတ်များနှင့် ငွေကြေးလက်ဖွဲ့ခြင်းမှ လက်ခံရရှိသော ငွေကြေးများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.mingalarletphwet.com ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းများနှင့်သာ လဲလှယ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေကြေးအဖြစ် ထုတ်မပေးနိုင်ပါ။
လူကြီးမင်း၏ ဧည့်သည်များနှင့် ၎င်းတို့၏လက်ဖွဲ့များ
လူကြီးမင်း၏ ဧည်သည်များမှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လူကြီးမင်းကဲ့သို့ပင် အရေးကြီးပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ ဧည့်သည်များ လက်ဆောင်ဝယ်သည့်အခါ နှင့်/သို့မဟုတ် ငွေကြေးလက်ဖွဲ့သည့်အခါ ဝန်ဆောင်ခ လုံးဝမကောက်ပါ။
လူကြီးမင်း၏ စာရင်းကို ဖြည့်ဆည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှတ်တံဆိပ်မိတ်ဖက်များကြားတွင် လူကြီးမင်းအတွက် အပြည့်အဝ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလွယ်ကူစေဖို့ ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ ဥပမာ - ပန်းအိုးတစ်အိုးအတွက် ပေးထားသော ငွေကြေးကို လူကြီးမင်း၏ ညစာဝန်ဆောင်မှု အတွက် ထည့်သွင်းလို့ပါက ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ ဧည့်သည်တစ်ဦးဦးက ပစ္စည်းဝယ်ယူလက်ဖွဲ့လိုက်သည့်အခါ လူကြီးမင်းကို တတ်နိုင်သမျှ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပါမည်။
မင်္ဂလာအချိန်ပြီးသွားသည့်နောက်ပိုင်း ရရှိသည့်လက်ဆောင်များအတိုင်း ယူမလား သို့မဟုတ် ယင်းငွေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဘက် ဆိုင်/အမှတ်တံဆိပ်များကြား ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုသလား ကြိုက်ရာရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
စိတ်ပြောင်းသွားခြင်း/ မလိုချင်သော လက်ဆောင်များ
လူကြီးမင်း၏ နောက်ဆုံး လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုများနှင့် လူကြီးမင်း ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ရေးမှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဓိကအရေးကြီးသော အရာဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ အမှာစာကို အတည်မပြုခင်အချိန်အထိ လူကြီးမင်း၏ ရွေးချယ်မှုကို လိုသလို ပြောင်းလဲနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့်အတွက် ဂုဏ်ယူကျေနပ်မိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပစ္စည်းပို့စဉ် ပျက်စီးခြင်း၊ မှားယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကြေညာထားသော ရည်ညွှန်းချက်နှင့် ကွဲလွဲနေခြင်းမှလွဲ၍ လူကြီးမင်းဘက်က ပစ္စည်းများကို လက်ခံပြီးသည့်နောက်ပိုင်း မလိုချင်သောလက်ဆောင်များ ပြန်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က လက်မခံနိုင်ပါ။
လူကြီးမင်းဘက်က လုံးဝစိတ်ချလက်ချရှိစေချင်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ လက်ဖွဲ့စာရင်းထဲသို့ လူကြီးမင်း၏ ဧည့်သည်များက လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းအတွက် ထည့်သွင်းလိုက်သော ငွေကြေးများကို သီးခြားဘဏ်စာရင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားပါမည်။
၁။ - မင်္ဂလာပွဲအစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းမည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်သူများက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လက်ဖွဲ့ပေးသူများကို ချက်ချင်းအကြောင်းရပါမည်။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို မင်္ဂလာပွဲဖျက်သိမ်းသည့်အကြောင်း လက်ဖွဲ့ဝယ်သူများကို အသိပေးရန်နှင့် ယင်းကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာနှင့် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့စာရင်းကို ပိတ်သိမ်းရန် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
၂။ - မင်္ဂလာပွဲ ဖျက်သိမ်းပါက မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့စာရင်းကို ပိတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လက်ဖွဲ့ပစ္စည်း၊ လက်ဖွဲ့ကတ်နှင့် လက်ဖွဲ့သူများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယင်းငွေကြေးကို လက်ဖွဲ့သူထံ ပြန်လည်ပေးပို့ပါမည်။ ဝန်ဆောင်ခ ပေးပါရမည်။ မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ သို့မဟုတ် MP Partners Co. Ltd မှ ကျခံရသော ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ပြန်ထုတ်ငွေထဲမှာ နှုတ်ယူသွားပါမည်။
၃။ - မင်္ဂလာပွဲ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် လက်ဖွဲ့များအတွက် ငွေပြန်ထုတ်ခြင်းကြောင့်် လက်ဖွဲ့သူများနှင့် သက်ဆိုင်သူများကြား ဖြစ်ပေါ်သည့် မည်သည့်တရားစွဲဆိုမှု အတွက်မှ MP Partners Co. Ltd က တာဝန်မရှိပါ။
၁။ လူကြီးမင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြားက သဘောတူညီချက်
ကျေးဇူးပြု၍ ပစ္စည်းမှာယူရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဤအဆင့်များအတိုင်း ပြုလုပ်ပေးပါ။
၁.၁ - ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပစ္စည်းမမှာကြားမီ အမှားအယွင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မှာကြားမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စစ်ဆေး ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
၁.၂ - လက်ဖွဲ့အတွက် ငွေကြေးပေးချေမှု အတည်ပြုပြီးချိန်တွင် ကျွနု်တို့ဘက်က မှာကြားမှုကို လက်ခံပါမည်။ ငွေပေးချေပြီးကြောင်း အတည်ပြုချက် လူကြီးမင်းဆီ ရောက်ရှိလာချိန်မှသာ ကျွန်ုပ်တို့ကြားက သဘောတူညီချက်စတင်ပါမည်။
၁.၃ - ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ လက်ဖွဲ့ကို မရောင်းပေးနိုင်လျှင် (ဥပမာ- ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ယင်းပစ္စည်း မရှိတော့ခြင်း သို့မဟုတ် မရရှိနိုင်တော့ခြင်း သို့မဟုတ် ဈေးနှုန်းမှားယွင်းနေခြင်း) ယင်းလက်ဆောင်နှင့် တန်ဖိုးညီမျှသောငွေကို လက်ဖွဲ့စာရင်းပြုလုပ်သူ၏ အကောင့်ထဲသို့ ထည့်ပေးပါမည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ယင်းငွေကို သုံးပြီး တခြားပစ္စည်းများ ဝယ်နိုင်ပါသည်။ ငွေကြေးလက်ဖွဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဆောင်ကတ်က မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ လက်ဖွဲ့စာရင်းဖွင့်သူ၏ အကောင့်ထဲသို့ ငွေအဖြစ် ဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းငွေဖြင့် အကောင့်ပိုင်ရှင်က ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် မည်သည့်လက်ဖွဲ့ကိုမဆို ဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်။
၂။ လက်ဖွဲ့စာရင်းဖွင့်သူ၏ လဲလှယ်မှုများ
၂.၁ - လက်ဖွဲ့စာရင်းဖွင့်သူကို အပြည့်အဝ ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသော လက်ဖွဲ့စာရင်းကို ဖန်တီးပေးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းများအရ ယင်းလက်ဖွဲ့ကို တန်ဖိုးအတိုင်း ငွေအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ယင်းငွေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ အခြားလက်ဖွဲ့များနှင့် လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။
၂.၂ - ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် လက်ဖွဲ့မှာယူခြင်းအားဖြင့် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များကို သိရှိ သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကြားက သဘောတူညီမှုမှာ လူကြီးမင်း ဝယ်ယူလိုက်သော ပစ္စည်းတန်ဖိုးအတိုင်း လက်ဖွဲ့စာရင်းဖွင့်သူက ငွေကြေးရရှိမှာဖြစ်ပြီး လက်ဖွဲ့စာရင်းဖွင့်သူရွေးချယ်လိုက်သော လက်ဆောင်တစ်ခုနှင့် လဲလှယ်ခွင့်ပြုရန် ဖြစ်ပါသည်။
​လက်ဖွဲ့စာရင်းဖွင့်သူက လူကြီးမင်း၏လက်ဖွဲ့ကို တခြားပစ္စည်းနှင့် အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့် လဲလှယ်ခြင်း ဖြစ်လာလျှင် လူကြီးမင်းရွေးချယ်လိုက်သော လက်ဆောင်ကို ပစ်ပယ်လိုက်သော်လည်း လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းစာရင်းဖွင့်သူက လက်ခံရရှိလိုက်သကဲ့သို့ လူကြီးမင်း မှတ်ယူစေရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းအား လဲလှယ်ခြင်းပြုလုပ်ပါက လူကြီးမင်းကို အသိပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။
၃။ ဤစည်းမျဉ်းများကို ပြောင်းလဲရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေး
၃.၁ - အောက်ပါအခေအြနေများကြောင့် အချိန်နှင့်အမျှ စည်းမျဉ်းများကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းဆီက ငွေပေးချေမှုကို ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသည့်ပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းများ (သို့မဟုတ်)
သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက် လိုအပ်ချက်များအရ ပြောင်းလဲခြင်းများ
၃.၂ - လူကြီးမင်းမှ လက်ဖွဲ့များကို မှာယူသည့်အကြိမ်တိုင်း ယင်းအချိန်တွင် အတည်ပြုထားသော စည်းမျဉ်းများမှာ လူကြီးမင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြား သဘောတူညီချက်အဖြစ် သက်ရောက်ပါလိမ့်မည်။
၃.၃ - အပိုဒ် ၃ အရ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပြင်ဆင်ည့်အခါတိုင်း ပြင်ဆင်လိုက်သော စည်းမျဉ်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာနေ့စွဲကို ဤစာမျက်နှာ၏ ထိပ်ဆုံးတွင် ဖော်ပြခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းကို လူကြီးမင်းကို အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။/p>
လက်ဖွဲ့စာရင်းကိုင်သူများက ၎င်းတို့၏ လက်ဖွဲ့စာရင်းကို အပြီးသတ် ပိတ်သိမ်းပြီးသည်နှင့် လက်ဖွဲ့များကို ၎င်းတို့ဆီ တိုက်ရိုက်ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅။ လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းများ၏ဈေးနှုန်းနှင့် ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခများ
၅.၁ - လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းများ၏ ဈေးနှုန်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြသွားပါမည်။ စနစ်အတွင်းသို့ သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ထည့်သွင်းချိန်တွင် လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများ မှန်ကန်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အသေအချာ ဂရုစိုက်ပါသည်။ သို့သော် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လူကြီးမင်းက လက်ဆောင်ကတ် ဝယ်ယူနေခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဖွဲ့ငွေ ထည့်ခြင်းဖြစ်ပြီး www.mingalarletphwet.com ကို လူကြီးမင်း ပေးချေလိုက်သော ငွေကြေးက လက်ဖွဲ့စာရင်းကိုင်သူ၏ ငွေစာရင်းထဲသို့ ဝင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅.၂ - လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွင် ပစ္စည်းပေးပို့ခများ ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၆.၁ - ရွေးချယ်စရာများစွာ ပေးထားပါသည်။ အကယ်၍ ရန်ကုန် သို့မဟုတ် မန္တလေးတွင် လူကြီးမင်းဆီက ငွေကြေးလာရောက်ယူရမည်ဆိုပါက ဝန်ဆောင်ခ ၃,၀၀၀ ကျပ် ပေးရပါမည်။
၇.၁ - ကျွန်ုပ်တို့ရောင်းချသော လက်ဆောင်ပစ္စည်းအချို့မှာ ထုတ်လုပ်သူ၏အာမခံ ပါပါသည်။
၇.၂ - ဝယ်ယူထားသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလက်ဖွဲ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာမခံကတ်ကို ထုတ်လုပ်သူဘက်မှ လက်ခံရရှိပြီးတာနှင့် ပစ္စည်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် လက်ဖွဲ့စာရင်းဖွင့်သူကို ကျွန်ုပ်တို့က အကြံပြုထားပါသည်။ အာမခံကတ်က လက်ဆောင်ပစ္စည်းထုပ်ထဲမှာ ပါလာရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဖြစ်ရပ်များ
၈.၁ - သဘောတူညီချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိသော ဆောင်ရွက်ချက်တစ်စုံတရာ ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင် တာဝန်ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပဖြစ်ရပ်ဆိုသည်ကို အပိုဒ်ခွဲ ၈.၂ တွင် ရှင်းလင်းထားပါသည်။
၈.၂ - “ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောဖြစ်ရပ်” ဆိုသည်မှာ ကျွနုပ်တို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခု ဖြစ်ပွားခြင်းတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။ ယင်းတို့ထဲတွင် အကန့်အသတ်မရှိ သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ ပဋိပက္ခကြောင့်လုပ်ငန်းပိတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အခြားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု၊ လူထုဆူပူအုံကြွခြင်း၊ အထိကရုဏ်းဖြစ်ခြင်း၊ ကျူးကျော်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ စစ်ပွဲ (ကြေညာသည်ဖြစ်စေ၊ မကြေညာသည်ဖြစ်စေ) သို့မဟုတ် စစ်ပွဲပြုလုပ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခြင်း၊ မုန်တိုင်းတိုက်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံ ပျက်စီးပြိုကျခြင်း၊ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုးများ သို့မဟုတ် အစိုးရပိုင် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ ပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရထားလမ်း၊ သင်္ဘော၊ လေယာဉ်၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အခြားသော အစိုးရ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက သယ်ယူပို့ဆောင်မှု အသုံးပြုရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
၈.၃ - သဘောတူညီချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များကို ထိခိုက်လာသည့် ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားပါက..
သဘောတူညီချက်ထဲတွင်ပါသော ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ကာလအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလကို ထပ်တိုးပေးပါမည်။
၉။ ကျွန်ုပ်တို့ကြားက အဆက်အသွယ်များ
ဤစည်းကမ်းချက်များတွင် စာဖြင့်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည့်အခါ အီးမေးလ်နှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ စာပို့ခြင်းများ ပါဝင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ အခြားအရေးပါသော စည်းမျဉ်းများ
၁၀.၁ - သဘောတူညီထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရာများကို အခြားအဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤစည်းမျဉ်းများအောက်ရှိ လူကြီးမင်း၏ အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် ဝတ္တရားများကို သက်ရောက်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ယင်းသို့ဖြစ်ပေါ်ပါက လူကြီးမင်းကို အကြောင်းကြားခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြခြင်းကို အမြဲပြုလုပ်သွားပါမည်။
၁၀.၂ - ကျွန်ုပ်တို့က စာဖြင့်သဘောတူညီကြောင်း ရေးသားပေးပို့မှသာ ဤစည်းမျဉ်းများအရ လူကြီးမင်း၏ အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် တာဝန်များကို တခြားသူထံ လွှဲပြောင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၀.၃ - ဤသဘောတူညီချက်မှာ လူကြီးမင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင်သာ ဖြစ်ပါသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ရန်အတွက် အခြားသူများတွင် အခွင့်အရေးများမရှိပါ။
၁၀.၄ - ဤစည်းကမ်းချက်များ၏ စာပိုဒ်အသီးသီးမှာ သီးခြားစီ ဖြစ်ပါသည်။ တရားရုံးက သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်က စာပိုဒ်တစ်ခုခုကို တရားဥပဒေနှင့်မညီဟု ဆုံးဖြတ်ပါက တခြားစာပိုဒ်များမှာ အပြည့်အဝ သက်ရောက်နေဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၀.၅ - ဤစည်းကမ်းချက်များအောက်ရှိ လူကြီးမင်း၏ဝတ္တရားတစ်စုံတရာကို လူကြီးမင်းအားဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တော်ငးဆိုရန် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ပျက်ကွက်လျှင် သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းအား ရင်ဆိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များဖြင့် အတင်းအကျပ်မပြုလုပ်လျှင် သို့မဟုတ် ယင်းသို့ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ နှောင့်နှေးနေလျှင် ယင်းမှာ လူကြီးမင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သက်ညှာလိုက်သည့် သဘောမဟုတ်သကဲ့သို့ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ယင်းဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန် မလိုဟုသော အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါ။ လူကြီးမင်း၏ ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုခုကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ခွင့်လွှတ်ကျေအေးလိုက်ပါက စာဖြင့်သာ အကြောင်းကြပါမည်။ ယင်းမှာလည်း နောင်တွင် လူကြီးမင်း၏ ပျက်ကွက်မှုများကို အလိုအလျောက် ကျေအေးမည်ဟုလည်း အဓိပ္ပာယ်မသက်ရောက်ပါ။
၁၀.၆ - ကျွန်ုပ်တို့ကြားက သဘောတူညီချက် မိတ္တူကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က ဖိုင်တွဲထားမည် မဟုတ်ပါ။
© Copyright mingalarletphwet.com 2020 All right reserved.